musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Boeing 737 MAX yakajekeswa kubhururuka muIndia airspace zvakare
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Parizvino, zana nemakumi mashanu neshanu kubva makumi mashanu neshanu akabvisa zvirango kunaMax, uye vanopfuura makumi matatu vafambisi vakadzosera ndege kubasa.
Indian civil aviation regulator unground Boeing 737 MAX jets.
SpiceJet inotarisira kutanga Boeing 737 MAX mashandiro mwedzi unouya.
India yakadzika 737 MAX jets munaKurume 13, 2019.
India's civil aviation regulator yazivisa nhasi kuti Boeing 737 MAX ndege dzakatenderwa kushanda muIndia airspace zvakare.
Ese maBoeing 737 MAX jets akaiswa pasi rose munaKurume 2019 mushure mekuwirana kaviri mukati memwedzi mishanu.
India yakanga yarambidza ndege dzese dzeMAX kubva pakubhururuka kuenda, kubva, mukati uye pamusoro penzvimbo yekumhara yeIndia munaKurume 13, 2019.
Munguva pfupi yapfuura, idzi ndege dzakatenderwa kubhururuka zvakare nevevamiriri vevashandi vezvekufambisa ndege muUS, EU, UAE nedzimwe nyika - mushure mekuita shanduko dzinodiwa dzekuchengetedza uye kuita Hardware nesoftware yekuchengetedza.
India SpiceJet Ltd yeChina yakati neChina inotarisira kuti maBoeing Co akadzika 737 MAX jets muzvikepe zvadzo kuti vadzokere kunoshandira pakupera kwaGunyana zvichitevera kugadziriswa kwakarova nemudiki Avolon pakubhadhara kwendege.
SpiceJet - iye chete mutakuri weIndia ane B737 Max muIndia - akapinda muchibvumirano naAvolon, mutengesi mukuru wendege dzeMAX, achigadzirira nzira kuti ndege yendege 737 MAX itange kudzokera kubasa… pakupera kwaGunyana 2021, kumutemo unobvumidzwa. ”
Mune zvese, paive ne gumi nemasere ndege dzeBoeing 737 Max muIndia - shanu ex-Jet uye 13 yeSpiceJet - panguva yekusimudza.
Indian billionaire investor Rakesh Jhunjhunwala anorongawo kuvhura nendege nyowani inodhura nekutanga kwegore rinouya aine B737 Max ngarava. Ex-Jet Max akaburitswa kunze nevashoma.
India's Directorate General weCivil Aviation (DGCA) mukuru Arun Kumar akapa chirevo chekubvisa pasi peMarch 2019 pasi peB737-8 / 9 MAX nhasi.
"Kununurwa uku kunoita kuti kushanda kweBoeing Company Model 737-8 uye Boeing Company Model 737-9 (MAX) ndege chete panogutsikana nezvinodiwa zvekudzoka kubasa," akadaro Kumar.
Pakutanga kwaApril, iyo DGCA yakanga yabvumidza ndege dzekunze-dzakanyoreswa Boeing 737 Max ndege yaive yakavakirwa muIndia kuburitswa kunze kwenyika. Izvo zvaive zvabvumidza kuwedzeredza kweMax yakagadziridzwa pamusoro peiyo Indian airspace.
Kutevera izvi, dzimwe ndege dzakanyoreswa kune dzimwe nyika dzakavakirwa panhandare dzakasiyana siyana muIndia dzakakwanisa kutora RTS.
Mune chirevo, Boeing akati: "Sarudzo yeDGCA idanho rakakosha pakudzosa zvakachengeteka 737 MAX kunoshanda kuIndia. Boeing iri kuenderera mberi ichishanda nevatarisiri nevatengi vedu kudzosera ndege kubasa repasi rese. "
Bahamas-Yakavakirwa Coral Vita Inokunda Yakakurumbira Muchinda ...
Kutenderera Presidential Palace muKabul neTaliban ...
Izvo zvaunoda kuti uzive nezve yezororo mwaka kutumira ...